एकै दिनमा एक हजारभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु – Khabar PatrikaNp
एकै दिनमा एक हजारभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु
August 3, 2020 238
१८ साउन । ब्राजिलमा विगत २४ घण्टामा एक हजार ८८ कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।आइतबार ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार विगत २४ घण्टामा ब्राजिलमा ४५ हजार ३९२ व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् भने सो अवधिमा एक हजार ८८ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।
ब्राजिलमा अहिलेसम्म कूल ९३ हजार ५६३ कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या २७ लाख सात हजार ८७७ पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
ब्राजिलको सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको साओ पाओलो शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित शहर हो जहाँ पाँच लाख ५२ हजार ३१८ व्यक्ति सङ्क्रमित रहेका छन् भने २३ हजार २३६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै रियो दि जेनेरियोमा एक लाख ६७ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका टन् भने १३ हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्वकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको मुलुक अमेरिका हो भने तेस्रो धेरै सङ्क्रमित रहेको मुलुक भारत हो ।
यसबाहेक रूस, दक्षिण अफ्रिका, मेक्सिको, पेरू, चिली, स्पेन, इरान, कोलम्बियामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । सङ्क्रमणका कारण मृत्यु बढी भएका मुलुकहरूमा मेक्सिको, बेलायत, इटली, फ्रान्स र भारत रहेका छन् ।
Prevलागूऔषध ब्राउन सुगरसहित दुई जना भारतीय नागरिक प्रहरी नियन्त्रणमा
Nextछोराले आमालाई सम्झिदा अर्जुन बिक भक्कनिए !
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीमा बिहीबार सुरु,परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारत जानुहुने,
यी ५ राशिहरुका लागि कात्तिक ३० गतेसम्म साढेसातिको दशा लाग्दै…..! थाहा पाउनुहोस ..!
बिहान उठ्नासाथ यी १० चीज देखिए भाग्य खुल्नेछ !
यी आमा जसले आफ्नो बालबच्चाको पेट पाल्न कपाल मुण्डन गरी १५० रुपैयाँमा बेचिन !